Dowladda Soomaaliya oo Shacabka Muqdisho Ka Raaligalisay Xirnaashihii Wadooyinka – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa ka war bixiyay natiijada booqasho labo maalin qaadatay oo dalka uu ku yimid madaxwaynaha dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti, Ismaaciil Cumar Geelle.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka oo si qota dheer uga war bixiyay xariirka walaatinnimo ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab, ayaa sheegay intii lagu guda jiray Booqashada wafdiga oo guul ku dhamaaday in Madaxweynayayaasha JFS iyo Jabuuti ay yeesheen wadahadallo labo geesood ah oo diiradda lagu saaray danaha ay labada dal wadaagaan, xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta labada dhinac, amniga iyo xasiloonida gobalka geesta Afrika iyo dardar-gelinta hawl-gallada ka dhanka ah kooxaha nabad-diidka ah.
Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhawaynta ballaaran ee ay u sameeyeen wafdiga uu hogaaminayay madaxwayne Ismaaciil Cumar Geelle.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar),ayaa shacabka Muqdisho ka raaligaliyay xirnaanshaha wadooyinaka Magaaladda Muqdisho labadii maalin aynu soo dhaafnay.
Madaxwayne Farmaajo iyo dhiggiisa Jabuuti ayaa maanta ay si wadajir ah waxa ay xarigga uga jareen dhismaha safaaradda cusub ee Jabuuti, iyada oo madaxwayne Ismaaciil Cumar Geelle uu hadal uu u jeediyay labada aqal ee baarlamaanka uu kula dardaarmay in la adkeeyo wadajirka, midnimada iyo wada shaqaynta.
Madxwayne Maxamed Cabdullaahi maxamed (Farmaajo) ayaa galabta garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cabulle Cusmaan ka sagootiyay Madaxwayne Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdigiisa Ballaaran oo ay kamid ahaayeen wasiirro iyo xildhibaanno oo labadii maalin ee ugu dambaysay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.